AMD ine yakawanda nhau ye2019! | Linux Vakapindwa muropa
The company AMD yakaratidza zvimwe zvitsva zvayo zve2019Pakati pavo, iwo anomiririra zvakanyanya ma microprocessor ayo matsva anoenderana ne3th Generation yeZen microarchitecture, ndiko kuti, Zen 2, iyo inouya semutsivi weZen +. Aya ma microprocessors anozove ne base ye 8 cores uye 16 tambo, iine kuita kuri 12% zvirinani pane iyo yazvino Zen +, nepo kugona kwemagetsi kuri kwakanyanya zvakanyanya, kunyangwe kuri nani pane iyo Intel yazvino, sezvo AMD yaisa simba rakawanda mukubudirira iri 33% yakakwira.
Idzi nhau dzegore nyowani hadzigumira ipapo, nekuti AMD inoda kuita kuti zviomere makwikwi eIntel uyezve neyechikamu chemifananidzo: NVIDIA. Mupfungwa iyi, akaunzawo iyo yekutanga maGPU kugadzirwa uchishandisa nzira yekugadzira ye 7nm, zvakafanana neako maCPUs achagadzirwa. Zvichakadaro, Intel inoenderera mberi iine matambudziko makuru neiyo 10nm uye ichinonoka kudzikira kwemaitiro ekugadzira gore rimwe nerimwe ... MaGPU ane 27% mashandiro ari nani muBlender, uye 67% zvirinani muOpenCL kupfuura avo vakavatangira. Iwo matsva 3rd Gen Ryzen uye iwo matsva 2nd Gen Radeon RX Vega handiyo chete zvigadzirwa. Yake EPYC renjiMicroprocessors yemaseva uye supercomputers zvakare yakave neyekuvandudza zvinoenderana nehurefu hwe desktop. Dzese dzatove dzakatsigirwa mushanduro dzichangoburwa dzeLinux kernel.
Izvo zvichafambidzana neyakagadziridzwa ku AMDGPU madhiraivha yeLinux zvakare, kuti uwane zvakanakisa kubva kuLinux mashandiro uye nekuvandudza iyo yakazara yemitambo uye yehunyanzvi ruzivo Asi, sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, kunewo akanaka nhau ane hukama ne AMD neLinux, uye ndezvekuti HP neAcer vatangisa mhando dzeChannelBooks yavo neChannelOS inofambiswa ne AMD machipisi, ehe, izvozvi iyo Ryzen inosvikawo kumalaptops aya. .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » AMD ine yakawanda nhau ye2019!
Iyo nyowani nyowani yePacketFence 8.3 yaburitswa
Iyo itsva vhezheni yeClonezilla Live 2.6.0-37 yakatoburitswa